Akụkọ - Omenala Otu Sunfly na Atụmatụ atụmatụ isiokwu
Otu Sunflymere nzukọ maka ndị ọrụ niile na 9thAug,2021.Nke a nzuko bụ banyere anyị ụlọ ọrụ omenala na theme stategic plan,niile ọrụ gara nzukọ a na-ege ntị nke ọma site President okwu.
AnyịOtu Sunflyna-elekwasị anya na mmepụta nke "Sunfly" brass manifold,Igwe anaghị agba nchara,usoro mmiri agwakọta,valvụ njikwa okpomọkụ,Thermostatic valvụ,Radiator valvụ, valvụ bọl,H valvụ, kpo oku, valvụ ikuku,valvụ nchekwa, valvụ, kpo oku ngwa, zuru ezu set nke ala kpo oku akụrụngwa.
Anyị Sunfly na-etinye uche dị ukwuu na owuwu ụlọ ọrụ anyị, anyị na-enwe nzukọ metụtara ọrụ maka ndị ọrụ niile ọtụtụ oge, ma kpọọ ụfọdụ ndị nkuzi a ma ama ka ha gwa ndị ọrụ anyị niile okwu kwa afọ.
N'okpuru bụ nkọwa nke omenala ụlọ ọrụ anyị:
Ọrụ ụlọ ọrụ: Kpebisie ike ịmepụta ngwaahịa HVAC dị mma, ahụike na gburugburu ebe obibi maka ndị na-azụ ahịa.
Ịzụ ahịa: Otu nzọụkwụ n'otu oge, nchụso na-adịghị agwụ agwụ.
Ọhụụ ụlọ ọrụ: Mepụta ọwa ụwa na-aga nke ọma.
Ụkpụrụ ụlọ ọrụ: Iche ndị ahịa ihu na-arụ ọrụ ezi obi, na-eche asọmpi ihu, nkwanye ùgwù na ịdị jụụ, na-eche mmepe ihu, ọganihu ọhụrụ, ọ dịghị mgbe ọ na-ada mbà, n'ihu nsogbu, na-atụ anya ahịa ahịa.
Amụma ịdị mma ụlọ ọrụ: Ogo mbụ, onye ahịa mbụ.
Azụmahịa nkà ihe ọmụma: anya ịhụ ahịa izute ahịa, ọganihu mmepe na ọhụrụ spirit.
Ọrụ mmekọrịta mmadụ: Mepụta ngwaahịa klaasị mbụ, zụlite talent ndị mbụ, wee mepụta uru ọha kacha mma.
Xinfan HVAC e guzobere maka 22 years.It bụ otu n'ime ndị mbụ ụlọ ọrụ aka na HVAC ụlọ ọrụ na ngwaahịa mmepe na China.We bụ ndị mbụ ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ndú na HVAC ụlọ ọrụ na anyị Yuhuan City.For ihe karịrị 20 afọ mmepe. , ngwaahịa anyị hụrụ n'anya nke ukwuu site n'aka ndị ahịa nọ n'ụlọ na mba ọzọ maka ịrụ ọrụ dị mma na àgwà ngwaahịa dị mma.
Anyị Sunfly bụ nnukwu ezinụlọ maka ndị ọrụ niile, anyị hụrụ ya n'anya nke ukwuu, ndị ọrụ niile ga-agbalịsi ike inye ike ha iji mee ka Sunfly anyị dịkwuo mma. Iji mepụta ma mepụta ngwaahịa kacha mma nye ndị ahịa bụ ọrụ mbụ dị mkpa, anyị hụrụ ezinụlọ Sunfly n'anya. ruo mgbe ebighị ebi!